ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး နာရီ (၅) လုံး (ပထမပိုင်း)
23 Mar 2018 . 4:50 PM
နာရီရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဟာ အချိန်မှန် ပြပေးဖို့သာ ဆိုကြပေမယ့် တချို့တွေက နာရီကို အဆင်တန်ဆာတစ်ခုလို့ ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတိုင်းမှာ နာရီပါလာပေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက နာရီကို အဆင့်အတန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပတ်နေကြဆဲပါ။ အခုဆောင်းပါးမှာတော့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးနာရီ (၁ဝ) လုံးကို (၂) ပိုင်းခွဲပြီး ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) Breguet Antique 2667
ကမ္ဘာကျော်နာရီကုမ္ပဏီ ‘Breguet’ က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အိတ်ဆောင်နာရီဟာ ဒေါ်လာ ၄.၅ သန်းတောင် ရှိပါတယ်။ ၁၈၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ သက်တမ်းအားဖြင့် (၂ဝ၄) နှစ်တောင် ရှိနေပါပြီ။ နာရီကို (၁၈) ကာရက်ရှိတဲ့ ရွှေနဲ့ အနားကွပ်ထားပြီး ဒိုင်ကွက် (ရောမ + အင်္ဂလိပ်) နှစ်မျိုးပြထားပါတယ်။
(၄) Louis Moinet ‘Meteoris’
ဆွတ်ဇာလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် ‘Louis Moinet’ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ‘Meteoris’ နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက လက်လုပ်နာရီဖြစ်နေလို့ပါ။ ပြီးတော့ မားစ်ဂြိုလ်ကနေ ကျလာတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို နာရီထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့အပြင် လေးလုံးသာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ပိုဈေးကြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Louis Moinet ‘Meteoris’
(၃) Hublot Big Bang
‘Hublot Big Bang’ နာရီရဲ့တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၅ သန်းရှိပါတယ်။ ၃ ကာရက်အနည်းဆုံးရှိတဲ့ စိန်ပွင့်ပေါင်း (၁,၂၈ဝ) ကို နာရီမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် ဈေးကြီးသွားဟန်ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ စိန်ပွင့်တွေအားလုံးကို ပုံစံတူဖြစ်စေဖို့ နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာသမားက သွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Patek Philippe 1518
‘Patek Philippe 1518’ နာရီကို ၁၉၄၁ခုနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက် အကန့်အသတ်နဲ့သာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး သူ့ရဲ့ဒိုင်ခွက်ပုံစံကြောင့် ပိုဈေးကြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားနာရီတွေက ရွှေရောင် ဒါမှမဟုတ် အဝါရောင်ဖြစ်ပေမယ့် သူကတော့ သတ္ထုရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မလေး ဈေးနှုန်းက ဒေါ်လာ ၁၁ သန်း။
(၁) Jacob & Co. Billionaire Watch
ဒီနာရီရဲ့ နာမည်ကိုက ကြီးကျယ်တာဗျ။ ဘာတဲ့ ‘Billionaire Watch’ တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ‘Jacob & Co’ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီနာရီက ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းတန်ကြေးရှိတာဆိုတော့ ဘီလျံနာတွေပဲ ဝယ်နိုင်မှာပါ။ (သာမန်သန်းကြွယ်သူဌေးလောက်နဲ့ အနားတောင် မကပ်နိုင်ပါဘူး။) မြပုံစံ သွေးထားတဲ့ စိန်ကာရက် (၂၆ဝ) ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် ဈေးနှုန်းကြီးတာပါ။ နာရီဒိုက်ခွက်က စက်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထိုးဖောက်မြင်နေရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး နာရီ (၅) လုံးက အပိုင်း (၁) အနေနဲ့ စုစည်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၂) အနေနဲ့ ဆက်လက်ဖော်ပြမှာမို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး ပရိသတ်ကြီး။
ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး နာရီ (၅) လုံး (ပထမပိုငျး)
နာရီရဲ့အဓိကလုပျငနျးဟာ အခြိနျမှနျ ပွပေးဖို့သာ ဆိုကွပမေယျ့ တခြို့တှကေ နာရီကို အဆငျတနျဆာတဈခုလို့ ဝတျဆငျကွပါတယျ။ စမတျဖုနျးတိုငျးမှာ နာရီပါလာပမေယျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတှကေ နာရီကို အဆငျ့အတနျးတဈခုအနနေဲ့ ပတျနကွေဆဲပါ။ အခုဆောငျးပါးမှာတော့ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံးနာရီ (၁ဝ) လုံးကို (၂) ပိုငျးခှဲပွီး ဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာကြျောနာရီကုမ်ပဏီ ‘Breguet’ က ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ အိတျဆောငျနာရီဟာ ဒျေါလာ ၄.၅ သနျးတောငျ ရှိပါတယျ။ ၁၈၁၄ ခုနှဈကတညျးက ထုတျလုပျထားတာဖွဈလို့ သကျတမျးအားဖွငျ့ (၂ဝ၄) နှဈတောငျ ရှိနပေါပွီ။ နာရီကို (၁၈) ကာရကျရှိတဲ့ ရှနေဲ့ အနားကှပျထားပွီး ဒိုငျကှကျ (ရောမ + အင်ျဂလိပျ) နှဈမြိုးပွထားပါတယျ။
ဆှတျဇာလနျနိုငျငံ အခွစေိုကျ ‘Louis Moinet’ ကုမ်ပဏီက ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ ‘Meteoris’ နာရီပဲဖွဈပါတယျ။ ထူးခွားတာက လကျလုပျနာရီဖွဈနလေို့ပါ။ ပွီးတော့ မားဈဂွိုလျကနေ ကလြာတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုကို နာရီထဲမှာ ထညျ့သှငျးထားတဲ့အပွငျ လေးလုံးသာ ထုတျလုပျထားတဲ့အတှကျ ပိုဈေးကွီးသှားတာဖွဈပါတယျ။
‘Hublot Big Bang’ နာရီရဲ့တနျဖိုးက ဒျေါလာ ၅ သနျးရှိပါတယျ။ ၃ ကာရကျအနညျးဆုံးရှိတဲ့ စိနျပှငျ့ပေါငျး (၁,၂၈ဝ) ကို နာရီမှာ ထညျ့သှငျးထားတဲ့အတှကျ ဈေးကွီးသှားဟနျရှိပါတယျ။ ပွီးတော့ စိနျပှငျ့တှအေားလုံးကို ပုံစံတူဖွဈစဖေို့ နယူးယောကျမွို့မှာရှိတဲ့ ကြောကျမကျြရတနာသမားက သှေးထားတာဖွဈပါတယျ။
‘Patek Philippe 1518’ နာရီကို ၁၉၄၁ခုနှဈမှာ ထုတျလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။ အရအေတှကျ အကနျ့အသတျနဲ့သာ ထုတျလုပျထားပွီး သူ့ရဲ့ဒိုငျခှကျပုံစံကွောငျ့ ပိုဈေးကွီးသှားတာဖွဈပါတယျ။ တခွားနာရီတှကေ ရှရေောငျ ဒါမှမဟုတျ အဝါရောငျဖွဈပမေယျ့ သူကတော့ သတ်ထုရောငျပဲဖွဈပါတယျ။ အောငျမလေး ဈေးနှုနျးက ဒျေါလာ ၁၁ သနျး။
ဒီနာရီရဲ့ နာမညျကိုက ကွီးကယျြတာဗြ။ ဘာတဲ့ ‘Billionaire Watch’ တဲ့။ ဟုတျပါတယျ။ ‘Jacob & Co’ ကုမ်ပဏီက ထုတျလုပျထားတဲ့ ဒီနာရီက ဒျေါလာ ၁၈ သနျးတနျကွေးရှိတာဆိုတော့ ဘီလြံနာတှပေဲ ဝယျနိုငျမှာပါ။ (သာမနျသနျးကွှယျသူဌေးလောကျနဲ့ အနားတောငျ မကပျနိုငျပါဘူး။) မွပုံစံ သှေးထားတဲ့ စိနျကာရကျ (၂၆ဝ) ထညျ့သှငျးထားတဲ့အတှကျ ဈေးနှုနျးကွီးတာပါ။ နာရီဒိုကျခှကျက စကျအစိတျအပိုငျးတှကေို ထိုးဖောကျမွငျနရေပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး နာရီ (၅) လုံးက အပိုငျး (၁) အနနေဲ့ စုစညျးဖျောပွတာဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၂) အနနေဲ့ ဆကျလကျဖျောပွမှာမို့ စောငျ့မြှျောအားပေးကွပါဦး ပရိသတျကွီး။